Imisebenzi - KingHOOD gaseous System Co., Ltd.
usekelo lwe-imeyili psa.kinghood@gmail.com
Call Ukusekela 0086-512-57710572
imishini Oxygen ekwenziweni
KingHOOD gaseous System kuyinto ucwaningo nentuthuko ephezulu tech kwebhizinisi futhi behileleke nakwezamabhizinisi isicelo VPSA imishini umoya-mpilo. Ethembele izinzuzo professional, inkampani ine ukuphathwa team omuhle, Ubuye ephelele hardware izakhiwo kanye iqembu lochwepheshe abanolwazi. Uhlelo ephelele nokuphathwa ezinengqondo luqinisekisa inkampani konke okusemandleni ethu kuzo zonke izici zokuphila. KingHOOD izimisele zonke izinhlobo VPSA ucwaningo i-oksijini imishini kanye nentuthuko, design, ukukhiqiza, yokuthengisa, inkonzo ezihlobene, ukuhlinzeka izeluleko lobuchwepheshe kanye nezixazululo.
KinHOOD ibambisane amabhizinisi okulandelayo ehola emhlabeni okuxhumana:
1, Enterprise kwezabasebenzi
Abaphathi eyinhloko kanye nabasebenzi lobuchwepheshe KingHOOD konke ukusebenza imishini igesi umkhakha eminyakeni engaphezu kuka-10, zonke zibe luningi isipiliyoni lochwepheshe. Kwaphela isikhathi eside, thina ngokufingqiwe umkhuba ngolunye uhlangothi, ngokusebenzisa onjiniyela lobuchwepheshe esizeni ukuvakashelwa, ukuthola inkinga, futhi ukwenza ngcono ezobuchwepheshe kaningi. Ngesikhathi esifanayo, sisalokhu ukugxila ubuchwepheshe umkhakha, zamukele abanolwazi eziphambili.
2, Design & yokukhiqiza umthamo
Onjiniyela bethu resposible zonke design kanye nemidwebo zokukhiqiza yethu. Thina beleivev nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha kuyinto core ukuthuthukiswa yenkampani suatainable. Ngaphezu kwalokho, KinHOOD Uhlale enolwazi amabhizinisi ehola emhlabeni okuxhumana, okuyinto kuyindlela esheshayo yokwenza ngcono ubuchwepheshe. Ngokusebenzisa adpoting le world'd ehola izinkampani zobuchwepheshe ezifana Bayer, Tosoh, ubambisana-Chinese Academy of Science, South China University of Technology, Haicheng Technology nezinye yesayensi ucwaningo amayunithi. Futhi ngokusebenzisa siqu imishini operation irekhodi, ngokuhlela zonke lezi zici kuholele imishini KingHOOD sika uye izici zayo siqu esiyingqayizivele, ubuchwepheshe babo ia njalo iyahola embonini. Ezinjalo njengoba ukufakwa yamangqamuzana ngesihlungo sika, ukusatshalaliswa komoya, ngcono uhlelo lokulawula, ukucushwa kwesistimu, ezinkulu igesi supply system, njll isicelo KingHOOD sika okuqhubekayo kobuchwepheshe obusha lithuthukisa nokuthuthukisa ithekhnoloji ye umkhakha ngesikhathi esifanayo.
umklamo Excellent kudingeka ancike kakhulu yokukhiqiza amandla. Sinazo ikhono ukuklama futhi akhiqize imishini ephelele. KingHOOD ube ekhethekile yamangqamuzana ngesihlungo kwemboni, workshop yezimboni zanamuhla, ibhizinisi ezihlakaniphile ehhovisi Isikhala Lokunhlobonhlobo ukufakwa team.
3, Ikhwalithi Izikhungo
izinga Izinsiza kusebenza nenkonzo ibaluleke kakhulu survial yenkampani, futhi kuyisihluthulelo ekuthuthukiseni. Senza ngokuvumelana namazwi esiqinile ukuphathwa izinga, sizama ukwenza ngcono ikhwalithi on-site service. Siqaphela imishini ka- nokuthuma, imishini ukulungisa iphutha, inkonzo sengqondo nokwaneliseka ikhasimende, senza umlando emva - isevisi irekhodi zonke amakhasimende. Sizokwenza ahlele personnels ukuba contactcustomer ngocingo, ngefeksi, i-imeyili kanye on-site ukuvakashelwa. Ukuze ukwazi imishini egijima isimo, usizo futhi liqondise ikhasimende ukugcina imishini, ukukhumbuza amakhasimende esifike esikhundleni izingxenye ezisele. Sikholelwa, isevisi yethu asebenzayo fast and professional uzokwenza zonke amakhasimende ethu bona inkonzo yethu okucabangela.
2018 Amaklayenti Ithebula
amaklayenti Igama Area Isicelo umthamo
Yunnan utshalomali Forsetry Futhi Umtfumbu Yunnan 10 Amathani Umtfumbu amakhorali 360Nm 3/ h
Tiger Ihlathi & Paper Group Hunan 8 Amathani Umtfumbu amakhorali 350Nm 3/ h
ChiTianhua Paper Guizhou 20 Amathani Bamboo Umtfumbu amakhorali 1400Nm 3/ h
Shaowuzhongzhu Fujian 4.5 Amathani Bamboo Umtfumbu amakhorali 400Nm 3/ h
Huaihua Juntai Hunan 40 Amathani Umtfumbu amakhorali 2000Nm 3/ h
Lee Man Paper isigayo Chongqing 12 Amathani Umtfumbu amakhorali 500Nm 3/ h
Fengli Paper Mill Hunan 5 Amathani Umtfumbu amakhorali 200Nm 3/ h
Yongfeng Paper Mill Sichuan 12 Amathani Umtfumbu amakhorali 700Nm 3/ h
ubuchwepheshe Haisum Vietnam 10 Amathani Umtfumbu amakhorali 400Nm 3/ h
Chenming iqembu Shandong 15 Amathani Umtfumbu amakhorali 600Nm 3/ h
Danhua iqembu Jiangsu Ukuvikelwa Enviroment 500Nm 3/ h
HSIK Wang Shan Twinking Star Hunan Oxygen ukuncibilika -enriched 2000Nm 3/ h
Qingdao Taiwan Fibre Glass Shangdong Glass sokuncibilikisa isitofu Oxygen -fuel 1750Nm 3/ h
Huajin iphepha Jiangxi 10 Amathani Umtfumbu amakhorali 600Nm 3/ h
Zhenxing iphepha Liaoning 12 Amathani Umtfumbu amakhorali 700Nm 3/ h
Haisum SKD Project Bangladesh Ukuvikelwa Enviroment 150Nm 3/ h
Laishan uginindela isigayo Sichuan Bamboo Umtfumbu amakhorali 380Nm 3/ h
Kediweijing Guangdong Glass sokuncibilikisa isitofu Oxygen ahlanganiswe 400 Nm 3/ h
Zhuji Paper isigayo Guangdong Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 350Nm 3/ h
Xingchangsheng Jiangsu ingxubevange sokuncibilikisa 250Nm 3/ h
Yunjinglin Paper Yunnan Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali Umtfumbu amakhorali 550Nm 3/ h
Wanjing Technology Myanmar Ukugcwalisa esiteshini ukusika (3 amasethi) 50Nm 3/ h
Suzhou zhong cai Angola Ukugcwalisa esiteshini ukusika (2 amasethi) 50Nm 3/ h
Suzhou zhonghua Mozambique Ukugcwalisa esiteshini ukusika (2 amasethi) 50Nm 3/ h
Liangmianzhen Jiangzi Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 500Nm 3/ h
Shuangdeng iphepha Mill Jiangsu Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 240Nm 3/ h
SFI Malaysia Ukuvikelwa Enviroment 600Nm 3/ h
SKK Philipines EAF25 Amathani 500Nm 3/ h
ithusi Xinhui Xinjiang sokuncibilikisa yethusi 1000Nm 3/ h
Shandong Fibre ingilazi iqembu Shangdong Glass sokuncibilikisa isitofu 3250Nm 3/ h
Quanlin iphepha Shangdong Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 3000Nm 3/ h
Luyang Shangdong Oxygen combusation ahlanganiswe 500Nm 3/ h
Wuliangye Group Sichuan Glass sokuncibilikisa isitofu 150Nm 3/ h
Jnshan chemical Indrusty hanan Oxygen igesi ahlanganiswe ukwenza 800Nm3 / h
double A Tailand Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 800Nm3 / h
Longmang ukuncibilika Sichuan sokuncibilikisa 2500Nm 3/ h
Laibin uginindela Mill Guangxi Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 500Nm 3/ h
Changhai iqembu Jiangsu Glass sokuncibilikisa isitofu 1300Nm 3/ h
Junlin ezenza imithi Hebei Pharmaceutical Amakhemikhali 500Nm 3/ h
Xingbang International Russia Iincwadi ezingakatloleki kuhle amakhorali 500Nm 3/ h
Shandong Fibre Glass Shangdong Glass sokuncibilikisa isitofu 1400Nm 3/ h
Jiali negesi Jinagxi Glass sokuncibilikisa isitofu 1800Nm 3/ h
Huabei Jingmao Gansu Oxygen ahlanganiswe 6000Nm 3/ h
Wuhai ukuncibilika Mengu Oxygen ahlanganiswe 4000Nm 3/ h
Huabo umkhakha Ukuhola Anhui sokuncibilikisa Ukuhola 3000Nm 3/ h
Shandong Fibre Glass Shangdong Glass sokuncibilikisa isitofu 2800Nm 3/ h
Jinhong negesi Shangdong Glass sokuncibilikisa isitofu 3850Nm 3/ h
Ubuchwepheshe Maolian Tianjin sokuncibilikisa yethusi 3334Nm 3/ h
inhong negesi Shangdong Glass sokuncibilikisa isitofu 2600Nm 3/ h
Dexing Imboni Ukuhola Jiangxi sokuncibilikisa Ukuhola 2000Nm 3/ h
Gansu Huayi Gansu sokuncibilikisa Ukuhola 1300Nm 3/ h
Jiangsu Jihua Jiangsu amanzi angcolile 2200Nm 3/ h
Fujain Newland negesi Tianjin Maolian Chian sesitimela Ukwakhiwa Iqembu CO., LTD Jilin Zambia Congo Ozone generator sokuncibilikisa yethusisokuncibilikisa yethusi 1120Nm3 / h 4000Nm3 / h 5000Nm3 / h
Denitration usebenzisa i-ozone denitration techn ...